निर्धक्क बसमा सरररर |
निर्धक्क बसमा सरररर
प्रकाशित मिति :2019-02-07 13:35:09
महिलाहरूसँग सौन्दर्यको कुरा गर्यो भने आकर्षित हुन्छन् भनेर हो कि के हो ? उसले मलाई लगातार सुन्दर बन्ने कुरा गरिरह्यो । ‘यो क्रिम यस्तो, त्यो क्रिम त्यस्तो, यसको यति महङ्गो पर्छ’ एकोहोरो फतफताइरह्यो ।
सौन्दर्यको कुराले म आकर्षित नभएपछि उसले पैसाको बिटो निकाल्यो । अनि गनेको जस्तै गरेर मेरो ध्यान खिच्ने कोशिस गरिरह्यो । सामान्यतया बसमा यात्रा गर्दा मानिसहरु पैसा देखाउँदैनन् बरू लुकाउँछन् । उ भने मलाई पैसा देखाउन उद्धत थियो ।
माथिको घटना २०६९ सालको वैशाखतिर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विराटनगरस्थित मामाघर बस्ने मेरी साथी कल्पना निरौलाले बसमा यात्राको क्रममा भोगेकी हुन् ।
उनी आफ्नो घर पथरी जाने बसमा यात्रारत थिइन् । जुङ्गामुठे अजङ्गको शरीर भएको अधबैँसे पुरूषको त्यो हाउभाउको विश्लेषण गर्दै उनले पैसाले लोभ्याउन त्यस्तो गरेको जस्तो ठानिन् । उनी त्यतिखेर झस्किइन् जतिखेर ती ‘भलाद्मी’ले घुम्न जाने प्रस्ताव गरे । पैसाको नोट र सौन्दर्यको बहसलाई उनले एकै वाक्यमा पूर्ण विराम लगाए, ‘बहिनी जाउँ मसँग घुम्न ।’
करिब डेढ घण्टाको यात्राका क्रममा कोचाकोच भरिएको बसमा सीट पाउनु ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेजस्तो भएको थियो उनलाई । संयोगवश एउटा सीट खाली पाइन् । तर, मराठी फिल्मको गुन्डा जस्तो व्यक्तिका डरले उनको बसाइ त्यति लामो समय टिकेन र जुरूक्क उठेर अगाडि गएर उभिइन् ।
यो एउटा सामान्य घटना मेरी पूर्व सहकर्मीको जीवनमा भएको हो । तर यो सामान्यतया चल्छ, नेपालको सार्वजनिक यातायातमा । महिलाहरूलाई एक्लै यात्रा गर्दा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि महिला यात्रा गरेर घर पुगुन्जेलसम्म अनेक छेडछाडको शिकार भएकी हुन्छे नै ।
सार्वजनिक यातायातमा मनलाग्दी छ, लापरवाही छ । बसमा कुनै जवान युवती छ भने उसँग गर्ने व्यवहार बूढाबूढी, गाउँलेहरूसँग सहचालकले पनि फरक–फरक स्वरूप देखाउँछन् । अझ यतिसम्म कि लहसिएर बोल्ने महिलाहरूलाई त भाडा छुट पनि दिन्छन् ।
सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु, गुन्द्रुक जसरी खाँद्ने, त्यही कोचाकोच भएको अवस्थामा ब्वाँसो प्रवृति भएको पुरूषहरूले मौकाको फाइदा उठाउने । भीडभाडमा मात्रै हैन, खाली बसमा पनि पुरूषको विकृत मानसिकता हावी हुन्छ भन्ने कुरा हालसालै एउटा भाइरल भएको भिडियोले पनि पुष्टी गर्छ ।
भिडियोमा एउटा केटाले बसमा हस्तमैथुन गरी अगाडि बसेकी महिलाको टाउकोमा वीर्य पोखिदिन्छ । अगाडि बसेकी महिलालाई त्यस्तो हुदाँसम्म केही अत्तोपत्तो छैन । सार्वजनिक सवारी साधनमा सी.सी क्यामेरा राख्ने सिष्टम भैदिएको भए, त्यो पुरूषमा त्यति गर्ने हिम्मत पनि आउने थिएन कि ?
सन् २०१८ को जुन २६ तारिख बेइजिङ उत्रिने बित्तिकै मेरो पहिलो गन्तव्य ‘पाइथास’ अर्थात् श्वेतचैत्य भयो । श्वेतचैत्य नेपालका महान कलाकार अरनिकोले सन् १२७१ युवान राजवंशकालमा निर्माण गरेका हुन् । उक्त मन्दिर बेइजिङको फुछङमनमा अवस्थित छ । यो मन्दिर बनाउन उनलाई ८ वर्ष लागेको थियो ।
यहाँ बुद्धका ७ हजार भन्दा बढी मूर्तिहरू छन् । मन्दिरका भित्ताहरूमा सुन्दर बुद्धका मूर्तिहरूले कुँदिएका छन् । नेपालीलाई मन्दिर प्रवेश गर्नका लागि शुल्क लाग्दैन । यहाँ पुग्दा जो कोही नेपालीको मन रमाउँछ । विदेशी भूमिमा पनि आफ्नो कलाले देशको शीर उच्च बनाएको छ र आफ्नो मातृभूमिको याद पनि दिलाउँछ ।
त्यो भन्दा पनि यतिखेर चाहिँ चीनको पहिलो स्थानीय बस यात्राले आत्मीयताको झल्को दिएको थियो मलाई । नक्सा अनुसार बस र पुगिने समय हेरेर निस्किएँ । नक्सा बमोजिम समयमै त्यहाँ पुगें । बसभित्र सुरक्षाकर्मी थिए । सुविधा सम्पन्न बस, सीमित मात्रामा सीट, बूढाबूढी, अशक्त र गर्भवती महिलाहरूका लागि छुट्याइएका ।
के सार्वजनिक यातायातमा एउटी महिला ढुक्क भएर हिँडडुल गर्न सक्छे ?
किन सरोकारवालाहरूको दिन प्रतिदिन अनैतिक क्रियाकलाप हुँदासम्म सुधार गर्न तम्सिदैनन् ?
म मध्यान्हतिर निस्केको हुनाले बूढाबूढीहरूको भीड रहेछ । पाको पुस्ताका लागि चीन सरकारले बस सेवा निःशूल्क बनाएको रहेछ । दिउँसो भीड नहुने भएकाले उनीहरू साथीभाइ भेटघाट गर्ने, घुम्ने रमाउने गर्ने रहेछन् । कसैको साथमा सानासाना नानिनातिनाहरू थिए भने कतिपयसँग आज्ञाकारी कुकुर ।
अहिले चीनमा धेरै बुढाबुढी छन् । म बस चढ्दा सीट खाली थिएन, उभिन लागेको थिएँ । एकजना पुरूष यात्रुले सीट छोडिदियो । केहीबेर पछि एकजना बुढी आमा चढ्नुभयो । उहाँको लागि मैले सीट छोडिदिएँ ।
बेङजिङको व्यस्त शहरी क्षेत्रमा ९ सय बस रूट छन् । लगभग २ सय १५ वटा रात्रीबस चल्छन् । सबै बसमा सीसी क्यामरा जडान गरिएका छन् । बसहरूमा महिला तथा पुरूष प्रहरीहरू खटाइएका हुन्छन् ।
त्यसैले चीनमा यात्रा गरेका महिलाहरूका कथन छन् –
‘अरू देशको तुलनामा चीनमा एक्लै यात्रा गर्न सुरक्षित छ, यहाँ यात्रा गर्दा कुनै पनि पुरूषले जिस्क्याएर छेंडछाड गरेको थाहा छैन ।’
‘चीनमा एक्लै दिनरात नभनीकन कुनै पनि महिलाले ढुक्क भएर यात्रा गर्न सक्छे ।’
‘चिनियाँहरू सहयोगी भावना भएका छन् । यात्रा गर्दा केही कठिनाई भए सक्दो सहयोग गर्छन् । त्यसैले चीनमा यात्रा गर्न रमाइलो र बस्न सुरक्षित छ । चीन बसाइ अविस्मरणीय बन्नेछ ।’
चीनमा यात्रा गरेका र बसेका केही महिलाको चीनप्रतिको धारणामा वास्तविकता ज्यादा छ । यस्तो भनिरहँदा यहाँ नराम्रा घटना नै नहुने भने होइन ।
यहाँ एकपटक यस्तो समाचार आएको थियो, ‘ती ती ता छ’ भन्ने निजी कम्पनीको ट्याक्सीमा एकजना महिलाको बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध भयो । उक्त घटनाको छानबिन पछि कम्पनी नियम बनाउन बाध्य भयो । अहिले उक्त कम्पनीका सबै ट्याक्सीमा आवाज पनि मुख्यालयमा सुनिने गरी प्रविधि जडान गरिएको छ । चीनमा कुनै पनि समस्या देखियो भने तुरून्तै पहल गरिन्छ ताकि ठूलो जनसंख्याले असुविधा भोग्न नपरोस्। पीडितले न्याय पाओस् ।
हाम्रो देशमा पनि नियम नबनाइएको चाहिँ होइन । सार्वजनिक यातायात आचार संहिता बनाइएका छन् । उक्त आचार संहिता २०६७ मा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई महिला मैत्री बनाउने सन्दर्भमा यस्ता सवारी साधनमा चालक परिचालक नियुक्ति गर्दा महिला वर्गलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अहिलेसम्म कति कार्यान्वयन भयो ? कतिको सार्वजनिक यातायात महिलामैत्री भयो ? के सार्वजनिक यातायातमा एउटी महिला ढुक्क भएर हिँडडुल गर्न सक्छे ? किन सरोकारवालाहरूको दिन प्रतिदिन अनैतिक क्रियाकलाप हुँदासम्म सुधार गर्न तम्सिदैनन् ?
लामो समयदेखि डर, त्रास, चिन्ता लिएर महिलाले सार्वजनिक यातायातमा सफर गर्नुपरेको छ । कहिले होला पुरूषले जस्तै महिलाले पनि यात्रा गर्दा ढुक्कले सरररर फुरूङ्ग हुँदै गुड्न पाउने ?